नेकपा एमालेः राजनीतिक, सांगठनिक र विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि के-के सुझाव आए ? खबरमञ्च
९ असोज, खबरमञ्च, at 10:50 PM
By खबर मञ्च / September 25, 2021 / Comments Off on नेकपा एमालेः राजनीतिक, सांगठनिक र विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि के-के सुझाव आए ?
काठमाडौं। नेकपा (एमाले) को जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक, साङ्गठनिक र विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको छ ।
ललितपुरस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा जारी बैठकमा आज १० समूहमा विभाजित टोली नेताले समूहगत छलफलपछि आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेसँगै बैठक आइतबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।
एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले टोली नेताबाट समाजवादको आधार निर्माणलाई पार्टीको कार्यदिशाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ भन्ने सुझाव आएको बताए।
यस्तै टोली पार्टीमा प्रत्येक तहमा युवाको नीति निर्माण तहदेखि कार्यन्वयनमा युवाको सहभागितामा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म बढाउनुपर्नेमा समेत सुझाव आएको उनको भनाई रहेको छ । उनका अनुसार पार्टीलाई बढीभन्दा बढी महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, मधेसी र जनजातिको सहभागिता बढाउँदै पार्टीलाई राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी बनाउने पनि सुझाव टोली नेताले दिएका छन् ।
उनले सङ्घीय संरचनाअनुसार सात जना थप्ने सुझाव आएको बताउनुभयो । सत्तरी वर्षे उमेरहद पनि कायम गरेर जानुपर्ने अधिकांशको सुझाव रहेको नेता भट्टराईले जानकारी दिए ।
यस्तै टोली नेताले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान पार्टी निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको उनले बताए।
आगामी स्थानीय निर्वाचनमा पहिलेभन्दा बढी र संसद् र प्रदेश निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आइतबार बस्ने बैठकले प्रतिवेदनमा आएका सुझावको आधारमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा महासचिव ईश्वर पोखरेल र विधान मस्यौदा प्रस्तावमा उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले जवाफ दिनेछन्।
उनीहरूले जवाफ दिएपछि बैठकले प्रतिवेदन पारित गर्ने नेता भट्टराईले बताए । शुक्रबारदेखि शुरु भएको बैठकमा भूगोलका सात प्रदेशका सात तथा जनसङ्गठन, केन्द्रीय विभाग र विशेष प्रदेशका तीन गरी १० समूहले आज तीनवटै प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल गरेका थिए ।
आइतबार प्रतिवेदन पारित गरिएपछि यही असोज १५ देखि १७ गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनमा ती दस्तावेश पेश हुनेछन् ।
Last Modified: September 26, 2021 @ 7:29 am
संघीय संसदका विभिन्न समितिहरूका बैठक आज बस्दै